Le yiSonos Beam 2 entsha, icwecwe, isandi esinamandla kunye noyilo oluphuculweyo | Ndisuka mac
Le yiSonos Beam 2 entsha, icwecwe, isandi esinamandla kunye noyilo oluphuculweyo
Kwakhona kufuneka sithethe ngefowuni eyaziwayo ye-Sonos kwaye kukuba namhlanje iveza ngokusesikweni isizukulwana esitsha se-Sonos Beam yesandi sayo, kulo mzekelo isizukulwana sesibini iBeam. I-Sonos stereos zilungelelene ngokwenene kwiinkalo ezininzi zayo, umgangatho wesandi, ixabiso, izinto ezisetyenziselwa ukwenziwa kunye noyilo lwayo.
Ngesi sihlandlo inkampani ihlaziya ibha yesandi ethandwayo kwaye iphucule imiba ethile yemodeli yangaphambili. Ukufika kwe I-3D yeaudiyo eneDolby Atmos, iphucula umgangatho wayo wesandi kunye noyilo kunye nokunxibelelana nemveliso ebonakalayo, i-HDMI eARC / ARC.
1 Uyilo olubuyiselweyo lweSonos Beam 2 entsha
2 Umsindo we-3D eneDolby Atmos Power kunye noMgangatho weSandi
3 Ukucwangciswa kunye nokunxibelelana nokusebenza ngokudibanisa iadaptha yokuphuma, i-HDMI eARC / ARC
4 Ukufumaneka kunye nexabiso leBham 2
Uyilo olubuyiselweyo lweSonos Beam 2 entsha
Kule meko singatsho ukuba eli binzana liyintsomi: "Ukuba iyasebenza, ungayichukumisi" kwaye uSonos ucinge ngokwenza into enjalo kodwa ukulungisa ezinye iinkcukacha. Ekuboneni kokuqala ibar yesandi entsha ijongeka ngokufana nesizukulwana esidlulileyo kodwa amanye amanqaku atshintshiwe ukuyiphucula.
Ukuba ungomnye wabo baneemveliso ze-Sonos ekhaya okanye bazi ezinye zazo, uyazi ukuba iSonos Arc ibonelela Umphambili wenziwe ngeplastarbonate enemigca. Ewe, i-Beam 2 entsha ifuna ukujonga into enje kwaye yongeza olu tshintsho kuyilo kwi-grill yangaphambili. Eli candelo langaphambili kuhlobo lwangaphambili lenziwe ngelaphu elihle kwaye ngoku xa uthatha i-Beam 2 ibonisa ukomelela ngakumbi kolu tshintsho. Obu bubuhle kuphela kodwa bunika imvakalelo yokuba ikhusela indawo yangaphakathi apho umlingo kunye namandla ezithethi zakho zifihliwe.
Imibala efumanekayo imnyama kwaye imhlophe kulo mzekelo mtsha weBam. Ngale ndlela akukho lutshintsho kwaye sibona imibala efanayo ebesinayo kuhlobo lwangaphambili lwale Sonos Beam inamandla. Kwelinye icala, icandelo lephaneli ephezulu lisachukumiseka kwaye noqwalaselo luyafana nemodeli yangaphambili. Eli qhosha lingenakuthula ukuze uthulise ii-microphone ze-Alexa okanye zikaGoogle xa unokuthi ungafuni ukukuva.
Umsindo we-3D eneDolby Atmos Power kunye noMgangatho weSandi
Xa sithetha ngezi ntlobo zezithethi ukonwabela iaudiyo engcono ngokungaphaya kunokunikezelwa zizithethi zeTV, kuya kufuneka sijonge indlela abazenza ngayo kwi-Sonos. Ngokuqinisekileyo yenye yeenkokheli zentengiso kolu hlobo lwebar yesandi kwaye yeyayo Ubudlelwane phakathi kwamandla, umgangatho wesandi kunye nexabiso lolunye lwezona zibalaseleyo.
Kule Beam yesibini-yesizukulwana sesibini, umgangatho wesandi ebesinawo kuhlobo lwangaphambili sele uphuculwe. Kule meko, itekhnoloji entsha yesandi yokuntywila yongezwa esivumela ukuba sonwabe ngomsindo kwiindawo okanye kwimiboniso ngalo lonke ixesha. Isandi seemoto ezidlula ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye, iinqwelomoya eziwela ngaphezulu kweentloko zethu kunye neziphumo ezibi ze-3D ngaphandle kokuba izithethi "zijolise eluphahleni" njengoko iArc isenza, umzekelo. Ukuba songeza enye i-Sonos One ngasemva kwesofa yethu, amava esandi aba ngamava alusizi, ahambisa i isandi esandisiweyo esivela kuzo zonke ii-angles.
I-Beam 2 entsha yongeza inkxaso kwiDolby Atmos. Le yinto abantu bonke abatsha abaya kuyithanda kwaye yintoni kunye namandla okuphucula aqhubekekayo kunye nolungelelwaniso lwesithethi esinezigaba ezitsha ezinikezela ngeendlela ezimbini zomsindo ezenziwe ngobude kunye nokujikeleza. Kule nto kufuneka songeze amava eAtmos akhokela kwaye abeke isandi esijikeleze igumbi.
Ngesi sihlandlo uSonos ukwabonisa oko esi sithethi sitsha sixhasa iAmazon Music HD. Ngokomgaqo azibonisi ukuba iyahambelana nezinye iinkonzo zomculo kumgangatho we-HD onje ngeSpotify okanye iApple Music.
Kwaye enye ingongoma ebalulekileyo kwesi sithethi sikaSonos kukuba ukutyikitya kubonisa oko Ekupheleni kwalo nyaka banokongeza inkxaso ekuchazeni i-DTS Digital Surround Sound. Umgangatho wesandi wale Beam 2 awunakuxoxwa ngoku, kodwa ukuba bongeza uhlaziyo okanye ukuphucula, bamkelekile.
Uqwalaselo nonxibelelwano ngokudibeneyo kunye neadaptha ukuphuma kwe-HDMI, i-HDMI eARC / ARC
Iinketho zoqwalaselo ezibonelelwa yile Beam 2 zibanzi ngokwenene kwaye bonke abo bangenawo umabonwakude benonxibelelwano I-HDMI i-eARC / i-ARC ungakhathazeki njengoko isongeza iadaptha yokuphuma kombane. Ngale ndlela, inxibelelaniswe ngokulula kumabonwakude ngokusebenzisa iadaptha kunye ne-voila, ngoku singonwabela amava omsindo wemultimedia kwiimovie, kuthotho nakwimidlalo.
Kodwa abo banokhetho lokudibanisa ibar yesandi kwizibuko I-HDMI i-eARC / i-ARC iya kufuna nje intambo ye-HDMI. Ukugqiba ngonxibelelwano, kufuneka kuthiwe i-Beam 2 yongeza ukhetho lokunxibelelana nenethiwekhi ye-Wi-Fi ngentambo ye-Ethernet okanye ngaphandle kwentambo. Ukwenza ngaphandle kwentambo sinokusebenzisa i-2,4 okanye i-5GHz iWi-Fi.
Unxibelelwano kwinethiwekhi yasekhaya ye-Wi-Fi iya kusebenza ukudibanisa i-iPhone okanye i-iPad nge-AirPlay 2 kwaye idlale umculo wethu owuthandayo. Ukongeza kunjalo iyahambelana nomncedisi we-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle ke unxibelelwano kwinethiwekhi luyimfuneko.
Ngokusengqiqweni le Usetyenziso olusemthethweni lweSonos luya kwenza ukuba unxibelelwano lwakho lube lula kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa kodwa kuya kufuneka ube nemizuzu embalwa ukuyenza kuba inika ukhetho oluninzi olufuna ixesha lakho. Akunzima konke konke, kukulandela amanyathelo, kodwa kuyinyani ukuba ukhetho oluninzi luthatha ixesha elide kunesiqhelo ukunxibelelana neapp.
Ukufumaneka kunye nexabiso leBham 2
Le bar yesandi intsha iya kufumaneka ukuze ithengwe kumazwe ambalwa. ukuqala ngoLwesibini olandelayo, Okthobha 5 ngexabiso le-499 euro. Ukuba uyafuna, ngoku ungagcina iNonos Beam yakho entsha Sonos iwebhusayithi esemthethweni.
Sukuba nexhala ngeli xesha malunga nokuba i-Sonos Beam 2 izokumilisela phi njengoko izakufumaneka ngomhla wokusungulwa kwayo. kumazwe amaninzi ehlabathi: Spain, United States, Mexico, Netherlands, Ireland, Germany, Austria, Australia, New Zealand, Singapore, China, Hong Kong, Japan, Portugal, Greece, Belgium, France, Italy kunye namanye amazwe.
Baye baphucula oko banokuphucula. Isithethi esipheleleyo esingenamona kwamanye amaxabiso aphezulu kwimarike, ixabiso layo lemali linoburhalarhume kuzo zonke izithethi zeSonos kwaye uyabona ukuba ngalo mzuzu unesinye sezithethi zawo ekhaya.
Elinye inqaku elinomdla ngale Sonos kukuba sinako Ngqamanisa isandi kunye nazo zonke izithethi zenkampani ngenxa yenkqubo yayo. Oku kuthetha ukuba xa sinezithethi ezininzi ze-Sonos ezixhumeke kwinethiwekhi ye-Wi-Fi sinesandi kuwo onke amagumbi aneenombolo ezingapheliyo zoqwalaselo olunokwenzeka. Ukumamela umculo kwigumbi elinye, ezinye iingoma kwenye, okanye ukulungelelanisa ivolumu ngokuzimeleyo zezinye zeendlela ezikhoyo.
Uyilo kunye nomgangatho wokumamela
Amandla amangalisayo kwimultimedia
Ukuphuculwa grille ngaphambili
Ngaba ayongezi unxibelelwano lweBluetooth
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Le yiSonos Beam 2 entsha, icwecwe, isandi esinamandla kunye noyilo oluphuculweyo
Isitokhwe seeshaja ezingama-96W sinqongophele kwaye zonke zikhomba kwi-16 "MacBook Pro